TogaHerer: WARIYE CAAN KA WADANKA JERMALKA OO QAADATAY DIINTA ISLAAMKA QORTAYNA BUUGA FROM MTV TO MAK
WARIYE CAAN KA WADANKA JERMALKA OO QAADATAY DIINTA ISLAAMKA QORTAYNA BUUGA FROM MTV TO MAK
WARIYE CAAN KA WADANKA JERMALKA OO QAADATAY DIINTA ISLAAMKA QORTAYNA BUUGA FROM MTV TO MAKA
Christian Baker waxay kamid aheyd Wariyayaasha ugu Caansan Telefeeshinka “MTV” ee Heesaha Faafiya, wexayna soo shaac baxday Magaceeduna waxa uu ku faafay Qaarada Europe laakin tijaabadii “MTV” kumeysan Qancin Nolosheeda iyo Ruuxdeeda, waxay Qaadatay Diinta Islaamka arintaas oo Nolosheeda Bog Cusub u Furtay.
Waxay tidhi Christian: waxaan Bilaabay inaan Baadi Goobo Jaceylka, laakin Markii aan Islaamka soo galay waxaan ogaaday i uu iga maqnaa Jaceylka ugu Wanaagsan waana Jaceylka Allaah, kadib Markii aan Helay Jeceylkaasna waxaan Qaatay Diinta Islaamka waxaanan noqday Mid gudata Waajibaadkeeda Diineed anigoo ah Gabadh Muslimad ah oo European ah.
Intaa kadib Baker waxaa Khasab ku noqotay inay wajahdo saxaafada German-ka ee ka hor yimid kadib Islaamitaankeedii, waxay sidoo kale Muwaajaho iyo colaadin kala kulantay Saaxiibadeed iyo Qoyskii ay ka dhalatay laakin Waxaaa si dhaqsa ah u Aqbalay Qaadashadeeda Islaamka Labada Waalid ee Dhalay.
Christian Baker ayaa hadalkeeeda sii raacisay: “ Reerkeygu Maanta aad bey u Faraxsanyihiin kadib Markii aan ka Qeyb Galay Doodo Badan oo ku aadan Qaadashadeydii Diinta Islaamka hadana waxay ku Qanacsan yihiin in Islaamnimadu iga dhigtay Gabadh aad ugu Xidhan Daacada Alle, Qoyskeygu Wey ka faa’ideen Islaamitaankeyga hadana waa kaalinta koowaad ee Nolosheyda.
“From MTV to Maka” waa Buug ay soo saartay Baker oo ay kaga hadleyso isbadalka weyn ee ku yimid Nolosheeda oo ah inay horey u aheyd Gabadh ku Caan baxday Mahrajaanada Heesaha iyo Xafladaha hanada noqotay Muslimad European ah hadafka buuguna waa inay kula hadasho Aqristaha European-ka ah si ay ugu Cadeyso Waxbadan oo Islaamka kamid ah oo ay Jaahil ka yihiin Reer Galbeedku.
Gabadhan lagu Magacaabo Baker waxay kamid tahay Haween Badan oo European ah oo Sanadihii Dambe uu soo jiitay Islaamku isla markaana jecleystay Diinta islaamka Dabadeedna Iyagoo ku Qanacsan Qaatay, hadana waxay Xubin Firfircoon ka tahay Dadka ku howlan sixitaanka Figradaha Khaldan ee Reer Galbeedku ka Qabaan Islaamka iyo Muslimiinta.